Cali Guray Ayaa Sheegay In Qodobada Lagu Heshiiyay Turkiga Ay Dan U Yihiin Kaliya Wasiirka Madaxtooyadda, Soona Dhaweeyay Golaha Wadatashiga | Salaan Media
Home Wararka Cali Guray Ayaa Sheegay In Qodobada Lagu Heshiiyay Turkiga Ay Dan U...
Cali Guray Ayaa Sheegay In Qodobada Lagu Heshiiyay Turkiga Ay Dan U Yihiin Kaliya Wasiirka Madaxtooyadda, Soona Dhaweeyay Golaha Wadatashiga
July 12,2013 Hargaysa(SM) July 11, 2013 Hargeysa(SM)– Guddoomiye ku xigeenka Saddexaad ee Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, Cali Maxamed Yuusuf(Cali Guray) ayaa sheegay in qodobadda lagu heshiiyay ay u dan yihiin keliya Wasiirka Madaxtooyadda Somaliland. Waxa uu intaasi ku daray in ay wada hadalada labada dhinac ee Somaliland iyo Somalia u dhaxeeyay ay ku dhaw yihiin dhamaad. Sidaasna waxa uu ku sheegay qoraal dheer oo uu soo geliyay Bogga uu ku leeyahay Facebook-ga ugu horeyna.
Cali Maxamed Yuusuf(Cali Guray) waxa uu wax lala yaabo ku tilmaamay in laba wadan oo aduunka ku wada yaala ay wada mamulaan hawada hal oo keli ah, waxaanu yidhi Horta ma jiro wadan hawadiisa uu wadan kale la maamulo. Waxan filayaa in mashruucani yahay wax uu keligii ka dambeeyo Wasiirka madaxtooyada oo og inu odaygana liqsiin doono guul beenaadda uu isagu soo hooyay.
Waxa muuqata in wada hadaladii Somaliland iyo Somalia ay haatan sii gudhayaan hadii aanay wada gudhin ba, maadaaama kulankan ba aan wax horumar ah laga gaadhin kuwa dambe hadii la isugu yimaadana wax la isku soo kordhin karaa ma jiraan.
Waxa qudha ee wasiirka madaxtooyadu u socday wuxu ahaa hunguri iyo sidii loo wada meelaysan lahaa lacagta ay bixiyaan dayuuradaha mara hawada Somaliland, taasi na wax la aqbali karo maaha. Somalia hawdeeda ha ka qaadato lacag Somaliland na hawadeeda.
Hadii ay sida wasiirka madaxtooyadu doonayo la aqbalo khataraheeda ayay leedahay lacgtaasina waxay halis u tahay in ay gasho gacmo qaldan ujeedooyin qaldanna loo adeegsado.
Waxa uu xusay Cali Maxamed Yuusuf in Wasiirka Madaxtooyadda Somaliland uu gacan-saar la leeyahay kooxo argagaxiso ah, waxaanu yidhi
Sababta oo ah Xirsi waxa dad badan oo sokeeye iyo shisheeye ba lihi u yaqaanaan inu gacan saar la leeyahay kooxaha xag jirka ah iyo xataa kuwo argagixiso ah ba. Sidaa daraadeed ma ah shakhsi lagu aamini karo masiir umadeed.
Waxa uu gabogabadii qoraalkiisaasi ku soo dhaweeyay golaha Wada-tashiga ee ay ku dhawaaqeen siyaasiyiinta reer Somaliland qaarkood
Ugu dambaystii halkan waxan ku soo dhawaynayaa Golaha Wada Tashiga iyo Toosinta Somaliland. Raga aan arkayay waxay ka mid yihiin intii Somaliland dhaqashada uGu dhabar jabtay. Kolay intii Somaliland dhuuniga u dhex joogtay qaylo ayay ku dhufan, loo joojin maayo se Bal hadda eega oo suga Madaxwayne Silanyo. Xagiisa Xasan Ciise, Ibrahim Dhegawayne, C/raxman Aw Cali, Maxamed Xaashi, oo dhamaantood ay SNM wada ahaayeen waxa kala mudan inanka yar ee adeerka uu u yahay, Saw cajiib maaha
Cadceedenews Hargeysa Office